नाकामा किन लाग्यो अचानक मानिसहरुको भीड ? | Online Khoj Khabar
Home समाचार नाकामा किन लाग्यो अचानक मानिसहरुको भीड ?
नाकामा किन लाग्यो अचानक मानिसहरुको भीड ?
२२ आश्विन २०७७, बिहीबार १६:३०
बाँके असोज २२ गते ।
नेपालगन्जको जमुनाह नाकामा विहीबार मानिसहरुको अस्वभाविक भीड लागेको छ । अत्यावश्यक कामबाहेक पनि भारत जानेहरु बढ्न थालेपछि नाकामा कडाइ गरिएको जमुनाह प्रहरी चौकीका इन्चार्ज विष्णु गिरीले बताउनुभयो । अत्यावश्यक कामका लागि भारत जान दिने गरेका थियौं तर सानातिना र आवश्यक नभएका मान्छेहरु पनि भारत जान थालेपछि कडाइ गरिएको हो उहाँले भन्नुभएको छ ।
औषधिउपचार, रोजगारीलगायतका अत्यावश्यक कामका लागि भारत जान दिने गरिएको छ । रोजगारीका लागि भारत जानेहरुलाई आधारकार्ड देखाएर जान दिने गरिएको छ भने औषधिउपचारका लागि औषधिको पर्चा देखाएर जान दिने गरिएको थियो । विभिन्न वहाना बनाएर अनावश्यक मान्छेहरु पनि भारत जान थालेपछि कडाइ गरिएको इन्चार्ज गिरीको भनाइ छ । नाकामा अनावश्यक भीडभाड हुँदा कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको छ ।
सरकारले भीडभाड नगर्न र सामाजिक दुरी कायम गर्न भने पनि जमुनाह नाकामा भने त्यसको ठाडै वेवास्ता गरिएको छ । कोरोना भइरसको संक्रमण दैनिकरुपमा बढ्दै गएपनि नागरिकहरु भने कोरोना नै नभए झै गरिरहेका छन् । नागरिकहरुको गैरजिम्मेवार बन्दा जोखिम झन बढेको छ । नागरिक सचेतना जगाउन सम्बद्धहरु जोडतोडका साथ लाग्न जरुरी देखिएको छ । अनावश्यकरुपमा नाकामा भीडभाड गर्दा प्रहरीलाई समेत व्यवस्थापनमा चुनौति थपिएको छ ।
नाका व्यवस्थित गर्ने सवालमा कुनै कसर बाँकी नराखिएको बताउनुभएको छ । एकजना प्रहरी अधिकारी भन्दै थिए, प्रहरीले शान्ति सुरक्षा दिने हो, हामीले शान्ति सुरक्षा दिएकै छौं, कोरोनाबाट जोगिन भीडभाड नगर्नुहोस् पनि भनेकै छौं तर मान्नु हुन्न् । जस्ले मान्दैन उस्लाई कोरोना आफैले कारवाही गर्छ ।
Previous articleविद्युत प्राधिकरण बिरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा, स्थानीय आक्रोशित, अगैयामा दुई घण्टा चक्काजाम
Next articleकोहलपुरबाट कस्तुरिको बिनासहित दुई जना पक्राउ
Javed Ansari - २२ आश्विन २०७७, बिहीबार १६:३० 0
OKK - २२ आश्विन २०७७, बिहीबार १६:३० 0